Orinasa mpivarotra ambongadiny tena ilaina amin'ny tsininy Cyperus huile essentielle rotundus sy mpanamboatra | HaiRui
ambongadiny Cyperus huile essentielle rotundus essentielle
Revitalizer amin'ny hoditra
menaka manitra rotundus
Rano matevina volontany
Volontany mavo mavo
Vokatra fikarakarana ara-pahasalamana
Drum Fiber 1,25kg miaraka amina harona plastika avo roa heny2. GI amponga 50kg / 180kg net.3. Toy ny takian'ny mpanjifa.
Quantity (kilao) 1 - 100 > 100
Est. Time (andro) 8 Hifampiraharahana
Drum Fibre 1,25kg misy kitapo plastika anaty anatiny
2. Amponga GI an'ny harato 50kg / 180kg.
3. Ho takian'ny mpanjifa.
48hours ho an'ny santionany / 7 andro manohitra ny fametraham-bola ho an'ny famokarana batch
Anaran'ny entana: Menaka Cyperus ao anaty menaka esansiela esory rotundus ao amin'ny fitrandrahana Herbal
-Menaka Cyperus Rotundus Linn matevina ary amber amin'ny ranoka volontany, fofona mavesatra
-Ny atiny misy menaka manitra Cyperus Rotundus Linen: cyperus rotundus L.en, alikaola cyperus rotundus, ary cyperone hafa
-Mamamoana linnusy Rotperus Rotundus ampiasaina amin'ny savony, ranomanitra, kosmetika, hanitra, tsiro sakafo sy divay, entona voamarina ara-pahasalamana, sy fadimbolana, effets analgesic
-Mamamoy linnusy Cyperus Rotundus Linn ampiasaina amin'ny fitsaboana aretin-kibo
-Cyperus Rotundus Linn Oil .manatsara ny toe-po sy manala ny fahaketrahana, mandrindra ny fitehirizana, mampiroborobo ny rà mandriaka, mamindra taova ao amin'ny atin'ny voalavo.
Ny vokatra lehibe:
Menaka sakamalao, menaka ahitra, menaka tongolo gasy, menaka manitra, menaka voasarimakirana, menaka voa manidina, menaka amandia mamy, menaka mikraoba, menaka primrose hariva, menaka Borage, menaka Patchouli, menaka lavender, menaka kininina, menaka kanelina, menaka Perilla, Reishi menaka spore, menaka sakay, menaka miora, menaka hazo dite, menaka sandal, menaka Oregano, Carvacrol, menaka spearmint, asidra ursolika, Borneol, Aloe vera oilandGinseng oiland sns.
fonosana amin'ny antsipiriany
Marika sy Logo namboarina: Misy
Formula vaovao misy vokany manokana
Fonosana 1.Customised, volume, logo
Tongasoa 2.OEM / ODM.
3.We dia afaka manome anao ny marika manokana amin'ny vidiny mifaninana.
Raha vantany vao mametraka ny baiko aminay ianao dia hanaraka ny baikonao ary hampahafantatra anao ny entanay
Ny dingana vaovao indrindra mandra-pahazoanao azy. Ho mihoatra ny
faly manome anao valiny ao anatin'ny 24 ora.
Ny orinasanay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana, fanodinana ary fivarotana ny menaka manitra voajanahary, izay nahatratra ny mari-pankasitrahana MSDS sy COA. Amin'ny fotoana rehetra dia mbola mifikitra amin'ilay torolàlana momba ny "fahavelomana amin'ny kalitao avo lenta isika, hivoatra amin'ny fahatokisana"
Ny orinasanay dia mandrakotra 26000 metatra toradroa, manangona tahiry 18 tapitrisa, miaraka amin'ireo fitaovana fanandramana ambony sy toerana fanandramana samihafa.
Ankoatr'izay, tsy manafika biby izahay na dia iray akory aza; isika dia anana 100%. & orinasa tia natiora. Ka ny fifidianana anay no fanapahan-kevitra raisinao.
1. F: Orinasa orinasa na mpivarotra ve ianao? Aiza ny orinasa misy anao?
A: Orinasa manamboatra ho an'ny fikolokoloana hoditra sy sarontava OEM / ODM izahay, nirotsaka tamin'ny famokarana kosmetika hatramin'ny taona 2006. Ny orinasanay dia miorina ao Jiangxiprovince, foibe famokarana solika tena ilaina ao Shina.
2.Q: Inona no azon'ny orinasanao atao amin'ny mpanjifanao?
A: Azontsika atao ny manao fikarohana fitaovana, famolavolana endrika isaky ny mpanjifa tsy dia mendrika loatra na takiana, manao famokarana, fanandramana kosmetika, fandrindrana ny fandefasana ho an'ny mpanjifanay.
3.Q: Ahoana no ahafahantsika manomboka orinasa miaraka amin'ny orinasanao?
A: Mifandray fotsiny amin'ny iray amin'ireo mpitantana anay, dia hataonay ho anao avokoa ny rehetra avy amin'ny idealy ka hatramin'ny fandefasana azy. Azontsika atao ny mamokatra ny kosmetika mifototra amin'ny fitakiana henjana, santionany na famolavolana.
4, nahoana isika no tokony hisafidy ny vokatry ny orinasanao?
Satria ny orinasan-tserasera misy vidiny na dia tsara kalitao aza, manana ekipa mpivarotra tena matihanina sy tompon'andraikitra, noraisinay sy nideran'ny mpanjifanay izahay, ary hanohy hanome ny serivisy tso-po, ny kalitao tsara indrindra ary ny vidiny mora indrindra, hiara-miasa aminao ho fampandrosoana sy ho vanona amin'ny ho avy. Azoko antoka fa ny orinasanay no safidinao ara-tsaina!
Menaka tena ilaina Basil
Menaka tena ilaina Patchouli
Menaka tena ilaina amin'ny thyme
Famaritana tsy miankina Top 6 Pure Aromatherapy Oils Esse ...
Menaka argany fikolokoloana volo virtoaly virtoaly maraokana
L-menthol voajanahary avo lenta miaraka amin'ny vidiny lehibe
Menaka Argan fikarakarana volo OEM madio
OEM / ODM sentetika / voajanahary voajary flakes / Bor ...
Factory Price Augmenting Appetite Fitsaboana Grad ...